ショッピングモール | JAPAN DISCOVERY
မူလနရော » ကုနျတိုကျ
Updated: 2016-06-21 16:13
စွတ်ခိဂျိ ဈေးကြီး ဟာ ကမ္ဘာ့ အဆင့်အတန်း ၀င် ကြီး မားလှတဲ့ ဈေး ကြီး ပဲ ဖြစ် ပြီး တော့ စွတ်ခိဂျိဈေး ကြီး နဲဆက်သွယ် ထား တဲ့ စီး ပွားရေး လုပ် ငန်း တွေ လဲ အများ အပြား ၇ှိ ပါတယ်။ ပုံ မှန် လာ ရောက် လည...
Updated: 2016-06-21 15:17
အာခိဟာဘရ လျှပ်စစ်မြို့ တော်
အခိဟာဘာရ ဟာ ကွန်ပြူတာ ၊လက်ပ် တော့ ကို အစပြု ပြီး ဆော့ဖ်ဝဲ ၊ အိမ်သုံး လျှပ်စစ် ပစ္စည်း၊ အော်ဒီယို ၊ ဂိမ်း အစရှိ တဲ့ ဆိုင် တွေ က တန်း စီ ပြီး တည် ရှိ တဲ့လျှပ် စစ် မြို့ေ တာ် ပဲဖြစ် ပါတယ်။ ဂိမ်းတွေ...
Updated: 2016-05-10 15:09
လင်းပိုင်တို့ရဲ့ ဆိပ်ကမ်း ဈေးဝယ်စင်တာ
ခါဂိုရှိ မား ရဲ့ ဆိပ် ကမ်း သာလေး တစ် ခု မှာ ရှိ တဲ့ ( လင်းပိုင်း တို့ ရဲ့ ရဲ့ ဆိပ်ကမ်း ဈေးဝယ်စင်တာ ) ကို ၂၀၀၅ခုနှစ် ၄ လပိုင်း မှာ စတင် ဖွင့် လှစ် ခဲ့ ပြီး နှစ် ထပ် ပါ ရှိ သော ရောင်းဝယ်ရေး စ...
အမြူ ပလာဇာ ခါဂိုရှိမား
ခါဂို ရှိ မား မှာ ပထမဆုံး ထုတ် လုပ် ခဲ့ တဲ့ ဖက် ရှင်ဘရန်း တွေ နဲ့ ခဂို ရှိ မား မြို့ ရဲ့ စာအုပ်ဆိုင် ကြီး တွေ CDဆိုင် ကြီး တွေ ၊ တူရိယာ အရောင်း ဆိုင် တွေ သပ်ရပ် လှပ စတိုင် ကျ တဲ့ စား သောက် ဆိုင...
Updated: 2016-05-10 14:44
တဲန်းမွန်းကန် ဈေးကြီး ဟာ ခရူးရှူး တောင် ပိုင်း ခရိုင် ရဲ့ ကြက်ပျံမကျ စည်ကား တဲ့ မြို့ ကြီး တစ်နေရာ ဖြစ် ပါတယ်။ ဈေးလျောက် လမ်းတစ် လျောက် မှာ ဒေသခံ အစား အစာတို့ ကို သုံး ဆောင် နိုင် တဲ့ ဆိုင...
Updated: 2016-05-10 13:14
ကမိဒိုးရိ နဲ့ ရှိ မို ဒိုး ရိ ( အထက် လမ်း နဲ့ အောက် လမ်း )
ခုမာ မိုတို မြို့ ရဲ့ လူ ဦးရေဟာ ၇သိန်း ကျော် ရှိ ပြီး တော့ ဂျပန် နိုင် ငံ အနောက်ပိုင်း ခရိုင် ရဲ့ စူပါ မားကတ် ကြီး တွေ တည် ရှိ ပါ တယ်။ ဈေး ရဲ့ လျောက် လမ်း ကတင် ၁ ကီ လို မီတာ ကျော် ရှည် လျာ...
Updated: 2016-04-12 16:59
၁၉၄၆ခုနှစ် မှာ စတင် တည် ထောင် ခဲ့ ပြီး တော့ ဆိုင်ခန်း အဟောင်း တွေ အရောင်း ဆိုင်တွေ နဲ့ ( ရှင်း တဲန်း ဂျင်း) ။ ခရူး ရှူး ရဲ့ အသစ် အဆန်း တွေ ကို မွေး ထုတ်ပေး ခဲ့ တဲ့ နေရာ ၊ တဲန်းဂျင်း ဧ၇ိ ယာ မှာ ရှိေ...
Updated: 2016-03-29 16:22
Nagasaki Western Museum
အနောက် နိုင် ငံ ရဲ့ ဟို တယ် လို့ တောင် ထင် ရတဲ့ ၃ ထပ် တိုက် ။ အတွင်း မှာ က စား သောက် ဆိုင် တွေ ၊ အထွေထွေ အရောင်း ဆိုင် တွေ ဖက်ရှင် ဆိုင် တွေ က တန်း စီ နေပါ တယ်။
Updated: 2016-03-29 16:09
ယူမဲတောင်း ယူမဲ အာရတိုး
ဖက်ရှင် ၊ အထွေ ထွေ၊ စား သောက် ဖွယ်ရာ အစရှိ သည် တို့ က ဆိုင်ပေါင်း ၁၂၀ ကျော် ပါ ၀င် ပါတယ်။ နာ ဂစခိ ဆိပ် ကမ်း အဆောက် အအုံ နဲ့ ကပ် ရပ် ဖြစ် တဲ့ အတွက် နာဂစခိ ပင်လယ် ကို တစ်လျောက် ကြည့် ရှု ရင်း နဲ့ စားသော...